AKFM: “Ahina ny ady an-trano” | NewsMada
AKFM: “Ahina ny ady an-trano”
“Noho ny lafiny stratejika eran-tany, manamafy ny fitsabahany amin’ny raharahan-tokantranon’i Madagasikara ireo hery vahiny samihafa, anamafisan’izy ireo ny fihazakazahany amin’ny fandrobana ny harembe eto amin’ny firenena.”
Io ny fanambaran’ny birao politikan’ny AKFM manoloana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Anisan’ny endrika isehoan’izay tetika politika izay ny finiavana hisakana ny kandidà sasany, heveriny fa hanohitra io politika io.
Ataony amin’ny alalan’ny fanaratsiana azy ireny izany, ny fitoriana azy any amin’ny fitsarana, ny fiadiana ho fanafoanana na fanemorana ny fifidianana. “Eo koa ny fikasan’izy ireo hamboly ady an-trano eo amin’ny samy Malagasy, raha tsy voasakany ireny kandidà toheriny ireny”, hoy ny fanambarana.
Mila hamafisina ny firaisam-pirenena
Manoloana izany, manantitra ny tokony hanamafisan’ny olom-pirenena tsirairay avy ny fanoherana izao fitsabahan’ny hery vahiny amin’ny raharahan-tokantranon’ny Malagasy izao ny AKFM, na inona endrika sy fomba isehoan’izany.
Hamafisiny ny antso ny hitandroan’ny vahoaka malagasy hatrany ny firaisam-pirenena amin’ny famotsipotserana ireo tetika maloto hizarazarana ny samy Malagasy: fananganana fikambanam-paritra etsy sy eroa, fanolorana sy fanohanana kandidà mifototra amin’ny foko na fiaviana.
Antsoiny koa ny mpisehatra politika rehetra hampitsahatra amin’izay ireo fomba ratsy teo aloha, indrindra hahatsiaro tena ka tsy hobaikoin’ny tombontsoa manokana na ny tombontsoan’ny vahiny.
“Ny fomba toy izany no anisan’ny miteraka izao savorovoro misy eto amin’ny tanindrazana izao, ary manakona ny fitakian’ny vahoaka maro anisa: fanalana izao fahasahiranana lalina mianjady aminy izao”, hoy ny AKFM.